Halyeeyada Liverpool oo weerar ku qaaday Benítez, kadib guuldaradii kasoo gaartay Chelsea – Gool FM
“Lacag & Caannimo kuma raacin, saddexleeyda kaliya ee uu dhaliyeyna waxay timid markii uu ishukaansanayey” – Gabadha ay saaxiibka yihiin Isco oo afka furatay
RASMI: Maamulka Premier League oo ansixiyey xeerka bedellada horyaalka & Tirada xiddigaha kursiga keydka soo fariisanaya
Diego Costa oo lagu xukumay lix bilood oo Xabsi ah & Faah-faahinta kiiska loo haysto
Kabtan Sergio Ramos oo raadinaya xilli ciyaareedkiisii labaad oo casaan la’aan ah!
Halyeeyada Liverpool oo weerar ku qaaday Benítez, kadib guuldaradii kasoo gaartay Chelsea
Dajiye August 26, 2018
(Premier League) 26 Agoosto 2018. Halyeeyada kooxda Liverpool Jamie Redknapp iyo Graeme Souness ayaa si xun u weeraray Benítez, sababa la xiriira qorsha ciyaareedka uu ku soo galay kulankii ay kooxdiisa Newcastle guuldarada kasoo gaartay dhigooda Chelsea.
Newcastle United ayaa guuldaro kasoo gaartay kulankooda saddexaad ee horyaalka Premier League xili ciyaareedkan cusub, kadib markii loogu awood sheegtay 2-1, xili ay ku ciyaarayeen garoonkooda.
Benítez ayaa kusoo galay ciyaarta qaab difaaceed, kadib markii ay ku difaactameen ciyaartoy fara badan, taasoo xaalada ku adkeesay ciyaartoyda kooxda reer London ee Chelsea 45-ka daqiiqo ugu horeesay ee ciyaarta.
Jamie Redknapp ayaa u sheegay shabakada Sky Sports “Way adkeyd in daawado, tani ma ahyn kubada cagta, waa sax inay shaqo tahay, laakiin ma aysan ahayn kubada cagta ee la daawan karo”.
“Waxaanahay Chelsea marnaba ma niyad jabno”… Hazard oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Newcastle
SHAXAHA RASMIGA AH ee kulanka Girona vs Real Madrid